Kooxaha Barcelona & Athletic Bilbao Oo Dhibcaha Ku Qaybsaday San Mames, Blaugrana Oo Iska Lumisay Fursad Dahabi Ah Xili Ay Lix Dhibcood Ku Qabteen Hogaanka La Liga. - Gool24.Net
Kooxaha Barcelona & Athletic Bilbao Oo Dhibcaha Ku Qaybsaday San Mames, Blaugrana Oo Iska Lumisay Fursad Dahabi Ah Xili Ay Lix Dhibcood Ku Qabteen Hogaanka La Liga.
Barcelona ayaan si buuxda uga wada faa’iidaysan guuldaradii xalay soo gaadhay Atletico Madrid waxayna markooda soo dhaafi kari waayeen kooxda Athletic Bilbao oo bandhig cajiib ah kala hortimid. Valverde ayaa cadaadis badan kala kulmay kooxdiisii hore ee Bilbao oo halis badan ku abuurtay goolhaye Ter Stegen oo kulan layaableh soo qaatay.
Barcelona ayaa lumisay laba dhibcood oo kale kulankii labaad oo xidhiidh ah ee horyaalka La Liga laakiin waxay wali awoodeen in ay hogaanka La liga ka dhigtaan 6 dhibcood kadib guuldaradii xalay soo gaadhay Atletico Madrid.
kAYDKA: Kevin-Prince Boateng, Jeison Murillo, Malcom, Ousmane Dembele, Inaki Pena, Thomas Vermaelen, Carles Alena.
KAYDKA: Ibai Gomez, Inigo Cordoba, Unai Simon, Unai Nunez, Kenan Kodro, Mikel San Jose, Iker Muniain.
Barcelona ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo arkaysay fursada hortaalay ee ay siddeeda dhibcood ugaga faa’iidaysan kartay guuldaradii Atletico Madrid ka soo gaadhay Real Madrid, wuxuuna Valverde kulankan difaaciisa bidix u adeegsaday Nelson Semedo iyada oo Jordi Alba uu ganaax ku maqnaa.
SIDOO KALE AKHRISO: Jurgen Klopp Oo Shaaca Ka Qaaday Hadalkii Uu Ku Yiri Goolhaye Adrian Ka Dib Qaladkii Uu Shalay Sameeyay & Eedeyn Uu U Jeediyay Daafaca Liverpool
Daqiiqadii 17 aad Athletic Bilbao ayaa ugu dhawaatay in ay goolka furitaanka kaga hor marto Barcelona kadib markii uu Susaeta uu darbo cajiib ah ku ganay goolka Barcelona laakiin goolhaye Ter Stegen ayaa si layaableh kubbada ugu duulay wuxuuna awooday in uu hal gacan ku badbaadiyay.
Daqiiqadii 24 aad Alla muxuu Gool Qurux badan noqon lahaa! Athletic Bilbao ayaa markale u dhawaatay in ay hesho goolka furitaanka laakiin kubbad laba lugoodley ahayd oo uu Raul Garcia si qurux badan iskula rogay ayuu arkay goolhaye Ter Stegen oo markale si cajiib ah kubbada shabaqa uga joojiyay.
Daqiiqadii 37 aad Lionel Messi ayaa ugu danbayn Barcelona u keeni gaadhay goolka furitaanka balse darbo uu Messi meel xerada ka baxsan uu ka soo tuuray ayuu goolhayaha Bilbao ee Herrerín uu awooday in uu joojiyay balse waxa uu iskaga saaray banaanka.
Dhamaadkii qaybtii hore Lionel Messi ayaa birta u garaacay Bilbao kadib markii uu goolhaye Herrerín uu goolkiisa ka soo baxay si uu Semedo fursad uga joojiyo laakiin darbada uu Messi ku tuuray goolka oo banaan ah ayaa birta sare ku dhacday.
SIDOO KALE AKHRISO: Kooxda Isbuuca Premier League: 11kii Xiddig Ee Todobaadkaan Ugu Fiicnaa Horyaalka Premier League Oo La Soo Saaray
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid aad u adag isla markaana ay labada kooxood awoodi waayeen in ay wax goolal ah dhaliyaan inkasta oo ay heleen fursado waa wayn gaar ahaan Athlitic Bilbao.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Barcelona soo laabtay iyada oo ku socota dardar ka xoogan qaabkii ay ahayd qaybtii hore ee ciyaarta laakiin Bilbao ayaa markeeda bilawday in ay dhaqan galiso qorshe ciyaareed oo cajiib ah oo iskugu xidhan difaacasho guud iyo waliba weeraro rogaal celis ah.
Daqiiqadii 63 aad markii ay ciyaarta waxba iska badali waayeen Valverde ayaa ciyaarta ka saaray Arturo Vidal oo qaladaad badan sameeyay qaybtii hore wuxuuna ciyaarta soo galiyay Carles Aleñà laakiin Bilbao ayaa wali ahayd kooxda difaac ahaan loo furfuri kari waayay.
Daqiiqadii 75 aad Ernesto Valverde ayaa u baahday in uu kaydka uga yeedho xidiga dhaawaca ka soo laabtay ee Ousmane Dembele wuxuuna ciyaarta ka saaray Philippe Coutinho oo markale aan samayn qaab ciyaareedkii ay ka doonayeen jamaahiirta kooxdiisa Barca.
Daqiiqadii 82 aad Athletic Bilbao ayaa weerar layaableh oo deg deg ah ku soo qaaday goolka Barcelona waxayna u muuqdeen in ay ugu danbayn jabinayaan ismari waaga ciyaarta laakiin goolhaye Ter Stegen ayaa markale gool cadaan ah ka beeniyay Williams kaas oo talaabo in ka yar darbo kaga soo tuuray.
SIDOO KALE AKHRISO: Mike Tyson Oo Qirtay Inuu Cabo Daroogada Xashiishada Oo Qiimaheeda Yahay 40 Kun Dollar Bil Walba
Daqiiqadii 87 aad Clement Lenglet ayaa ciyaarta dhamaysan kari waayay kadib dhaawac soo gaadhay waxaana kaydka looga yeedhay Thomas Vermaelen waxayna ciyaartu noqotay mid labada kooxoodba ay dagaalka ugu badan ku bixinayeen.
Daqiiqadii 90+1 aad Marcos ayaa loo taagay kaadhka labaad ee digniinta ahaa kadib markii uu gacan ku joojiyay kubbad weerar deg deg ahaa oo uu Suarez ka daba tuuray Dembele laakiin markii lagu jaho wareeray ee uu garsooruhu kaadhka digniinta ah siiyay Marcos ee uu ciyaarta iskaga sii jiray ayuu kadib saxay go’aankiisa waxaana ciyaarta laga saaray Marcos.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay babraro gool la’aan ah waxayna Barcelona iska lumisay fursad ay siddeed dhibcood ugu qaban lahayd hogaanka La Liga laakiin waxay awoodeen in ay hal dhibic oo kaliya ka soo heleen San Mames iyada oo Barca hadda lix dhibcood oo kaliya ka saraysa Real Madrid oo kaalinta labaad soo gashay.